Nanome tolotra aterineto mora ny orinasan’ny finday ao Mozambika sy Cap Vert mba hanentanana ny olona hijanona ao an-trano · Global Voices teny Malagasy
Samy nanambara fahamehana mandritra ny 30 andro ireo firenena roa ireo
Voadika ny 14 Avrily 2020 8:01 GMT
Vakio amin'ny teny Español, English, Français, Italiano, русский, Ελληνικά, Yorùbá, عربي, Português
Lalana Santa Maria, Cap Vert. Saripikan'i Miccaela, Wikimedia Commons. CC-BY 3.0
Mihabetsaka hatrany ireo Afrikana voabaiko hijanona any an-tranony ao anatin'izao valanaretina COVID-19 izao, nanolotra fihenam-bidy lehibe amin'ny angondrakitra finday ny orinasan'ny fifandraisandavitra any Mozambika sy Cap Vert izay an'ny fanjakana.
Tranganà COVID-19 miisa 10 hatreto no hita tao Mozambika ary tsy mbola nisy maty, raha nahitana tranga miisa enina sy maty iray kosa tao Cap Vert. Tamin'ny herinandro lasa teo, samy nametraka fahamehana mandritra ny 30 andro ny firenena roa, sy ny mety hisian'ny fanitarana izany.
Araka ny filazan'ny masoivohom-baovao Lusa ao Portugal :
Nanambara ny hetsika fanentanana miaraka androany ny mpamatsy tolotra finday roa ao Cap Vert, CV Móvel sy Unitel T +izay hanomezana tolotra aterineto maimaimpoana 2.000 MB mba hanentanana ny olom-pirenena hijanona ao an-trano, ho endrika fisorohana ny COVID-19.
Nomena anarana hoe “Fica em Casa” (“mijanona ao an-trano” amin'ny teny malagasy), nambaran'ny mpamatsy tolotra finday roa tao amin'ny tambajotra sosialy tamin'ny hafatra ny tolotra izay nilaza fa “niara-niasa” izy ireo” mba hijanon'ireo Cap Verdeana ho lavitry ny aretina “any an-trano”.
Omen'ireo mpandraharahan'ny fifandraisandavitra roa ireo anaty fonosana iray miaraka amin'ny angondrakitra 2000 MB ny antso 15 minitra ho an'ny tambajotra rehetra izay azo ampiasaina hatramin'ny 30 aprily.
COVID-19: Manome aterineto 2000 MB ny fanentanana ho fanampiana ny Cap Verdeana hijanona any an-trano.
Misalasala amin'ny fahombiazan'ny fanentanana tahaka izao ny olona vitsivitsy satria maro ny Cap Verdeana no tsy manana fifandraisana aterineto tsy tapaka:
Mampihomehy !!! Firy ny Cap Verdeana manana aterineto ? Ndana mandeha any !
57 isanjaton'ny mponina miisa miisa 560.000 no mampiasa aterineto ao amin'ny firenena nosy Cap Vert, araka ny angondrakitra tamin'ny 2017 nataon'ny Banky Iraisam-pirenena. 50 isanjato ny salan'isa ankapobeny manerantany tamin'io taona io.
Nanao fanentanana toy izany ihany koa niaraka tamin'ilay teny filamatra hoe “mijanona ao an-trano” ny mpandraharahan'ny finday an'ny fanjakana TmCel tany Mozambika, izay ambany kokoa indray ny fidirana amin'ny aterineto, hoy ihany ny tatitra nataon'ny Banky Iraisampirenena izay nilaza fa ny 10 isanjaton'ny olona miisa 30 tapitrisa ao aminy ihany no mpisera aterineto, .
Ahitana tolotra manomboka amin'ny 1 ka hatramin'ny 5 GB, mitentina 25 ka hatramin'ny 100 meticals (0.37 ka hatramin'ny 1,50 USD) ny fanentanana.
Ampiasao ny tolotra #Mijanonaaoantrano 25 meticals manan-kery mandritra ny 30 andro.
Tsindrio ny *219# safidio ny tolotra ary mijanona ao an-trano miaraka amin'ny Tmcel. Raha mila fanazavana fanampiny dia tsidiho ny rohy eto ambany :: https://t.co/dKoUI0E0wT
Nisy mpisera Twitter vitsivitsy nametra-panontaniana na dia toa hita fa tafita tsara aza ny tolotra:
Tsara ny fandraisana andraikitra.
Tsara ihany koa ve ny kalitao?
Tsy mora ho an'ireo mpiasa tsy ara-dalàna sy ireo mitady ny hohaniny isan'andro ny fijanonana ao an-trano na ao Mozambika na ao Cap Vert. Nisioka ilay mpikatroka Tomás Queface hoe:
Manambara endrika iray hafa amin'ny tsy fitoviana ara-tsosialy ny #Coronavirus. Raha tombondahiny ho an'ny olombitsy manokana ny #Mijanonaanyantrano dia zava-manahirana hatrany kosa izany ho an'ny mahantra: na mijanona ao an-trano tsy misy sakafo na manohy ny asa ary mampidi-doza ny fahasalamany sy mampidi-doza ny fahasalaman'ny hafa.